fanontaniana Convair 580 FSX
1 taona 1 volana lasa izay #993 by sruble
Vao haingana aho no nandefa ilay mpizara 580 fsx. Ny olana ho ahy dia tsy misy vc na 2d panorenana mihitsy. Tena ilaina ny fanampiana rehetra. Misaotra anao
1 taona 1 volana lasa izay - 1 taona 1 volana lasa izay #994 by DRCW
Hello, inona ny version of FSX no mihazakazaka? Voasazy na Ditra? Mandeha ao anaty horonantsary DX10 ve ianao? Raha toa ka efa andian-daka FSX ianao, moa ve Deluxe? Raha toa ka efa nandefa SP1 sy SP2 ianao?
Mampiasa ny fanontana volamena FSX Boxed aho izay tonga amin'ny fanaparitahana, (SP1 & SP2). Navoakako ity fiaramanidina tsy misy olana ity. Manana VC tanteraka aho. Tsy misy kitapo fiaramanidina 2D ao amin'ity modely ity. Ny mpamorona dia nampiasa fitifirana fizarana avy amin'ny fiaramanidina hafa ao amin'ny FSX .. Hamaronao amin'ny lohateny (SP2 FSX) Raha tsy misy SP1 sy SP2 no ampiasaina dia tsy hiasa io fiaramanidina io. Tadiavo ireo piesy flyawaysimulation etsy ambony, ary tokony hanana fiaramanidina miasa ianao. Cheers!
Fanovana farany: 1 taona 1 volana lasa izay by DRCW.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: sruble
1 taona 1 volana lasa izay #1004 by sruble
Miasa Steam aho, nesoriko izy io ary averiko indray fa tsara ilay vc. Misaotra
1 taona 1 volana lasa izay #1005 by DRCW
Henoy ny mandre fa miasa izany. Raha toa ka mihazakazaka windows 10 ianao, tsidiho ny Internet amin'ny olana rehetra fantatra amin'ny FSX. Happy Landings
Fotoana mamorona pejy: 0.256 segondra